Nhau, 01 Gunyana 2017
Madzimai Anorarama nekuTengesa Huswa kuMakuti Anoti Zvinhu Zviri Kuvaomera Zvakanyanya
Mamwe madzimai ekuMakuti mudunhu reMashonaland West ari kurarama zvakaoma nekutengesa huswa hwekupfirira dzimba, bhizinisi ravanoti rave kuvawanisa mari shoma zvichienzaniswa nenguva yakare.
VaMugabe Vanoti Vanogona Kusungisa Vanova Pumha Huroyi paNyaya yaVaMnangagwa
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakati vanogona kusungisa vanhu vavanoti vari kuvapumha huroyi, vachikurudzira vatsigiri vebato ravo reZanu PF kuti vabatane vasiye tsika yekurwira masimba.
MISORO YENHAU DZANHASI, GUNYANA, 01 2017
Nyaya yehuroyi nemuchetura yonetsa mubato reZanu-PF zvokonzera kunetsana kwakanyanya pakati pevari kudivi remutevedzeri wemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnagagwa uye vari kuchikwata chinonzi Generation 40. Mutungamiri webato iri VaRobert Mugabe vanoramba kuti VaMnangagwa vakapihwa muchetura.
Nyamavhuvhu 31, 2017
Vamwe Vagari veKuDzivarasekwa Vodzingwa Mudzimba dzeKanzuru
Kanzuru yeHarare yange yapa vamwe vagari vemumusha unogara vazhinji weDzivarasekwa kusvika nemusi weChina kuti vange vabva mudzimba dzavo nekutadza kubhadhara mari dzemitero.
VaZuma Vanoti Havasi Gweta Nekudaro Havangataure nezveNyaya yaAmai Mugabe Yekusaendeswa kuMatare
Mutungamiri wenyika wenyika yeSouth Africa VaJacob Zuma nemusi weChina vakaudza dare reparamende renyika yavo kuti hapana chavanokwanisa kutaura nenyaya yemudzimai wemutungamiri wenyika yeZimbabwe Amai Grace Mugabe padanho rakatorwahurumende yavo re kuti vasaendeswe kumatare.
MDC Alliance Yoita Musangano muBulawayo
Mubatanidzwa wemapato anopikisa, weMDC Alliance, uri kutarisirwa kuita musangano muBulawayo nemusi weMugovera.
Masangano Akazvimirira Oga Anoti Ave Kurambidzwa Kushanda Mune Dzimwe Nzvimbo
Mamwe masangano akazvimirira oga ari kupomera hurumende mhosva yekuda kuvakanganisa mashandiro avo sezvo nyika yatarisana nesarudzo gore rinouya.
Bato reMDC-T Rosvora Kufora kweNhengo dzeZanu PF muHarare
Mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira ari kusvora zvikuru kufora kwakaita nhengo dzeZanu PF muHarare nemusi weChitatu dzichiti dzaitsigira mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe.
MISORO YENHAU DZANHASI, CHINA NYAMAVHUVHU 31, 2017
Hurumende inonzi yoferefeta mashandiro emasangano akazvimirira ega nechinangwa chekuda kutorera vamwe marezinesi sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa.